Ubungozi be-SEO kunye nendlela yokuPhumeza iSicwangciso esigqibeleleyo | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Matshi 22, 2013 NgoLwesihlanu, Matshi 22, 2013 Douglas Karr
Izolo besinenkomfa yengingqi enkulu ebiququzelelwe Ingeniso yeNtla. Izihloko bezibandakanya amashishini, itekhnoloji kunye nentengiso kwaye ndivule usuku ngengxoxo yobungozi be-SEO.
Kuninzi okutshintshileyo kwimveliso yokukhangela yeinjini yokukhangela. Omnye wabantu endandikhe ndaya nabo wahlekisa nam esithi ndineengcebiso eziphikisanayo kwiminyaka embalwa eyadlulayo. Andizange ndivume. Ndilutshintshe ngokupheleleyo uluvo lwam ngendlela i-SEO ekufuneka isetyenziswe ngayo kwaye yeyiphi ingqwalaselo ekufuneka ihlawulwe kwisicwangciso.
Ingxaki ye-SEO yingxaki yezibalo. Ukukhangela yingxaki yabantu. Iinkampani ezininzi ze-SEO zijongana nomcimbi zivela kwicala elingalunganga. Endaweni yokujonga ivolumu yokukhangela kunye nenqanaba, kuya kufuneka bajonge kuguquko lwakho, ukuba iindwendwe zifika njani apho, kwaye emva koko zibuyele umva nokuba okanye ungazibekeli bhetele kwimigqaliselo kuya kuqhuba ukugcwala kwabantu ngakumbi.
Ngaphandle kokuqonda ukuba abathengi bakho bafike phi kwaye njani, isitshixo kwisicwangciso esiliqili se-injini yokukhangela silula ngokulula- Yenza into ethethwa nguGoogle. Kulula kakhulu-uGoogle unento enkulu Isikhokelo se-SEO abazipapashayo, kunye ne Isikhokelo sokuqala se-SEO sephepha le-1.
IHierarchy, i-sitemaps, ulwakhiwo lwekhasi, ukusetyenziswa kwegama eliphambili, ukubhala, iselfowuni, ukubuyela umva, ukukhangela kwendawo kunye nokuhamba rhoqo zonke izinto zibandakanyiwe njengeendlela zokuphucula indawo yakho. Intlalontle iqhume kwindawo ngoku, nangona kunjalo, kwaye iyaqhuba kwaye isondla iziphumo zeinjini yokukhangela. Ayisiyiyo kuphela eyokuqhuba kwezentlalo kwizabelo ezininzi (eziqhuba amakhonkco… eqhuba isikhundla), uGoogle unayo ngokwenene uye emfazweni kunye Amaqhinga amnyama. Isigaba esilandelayo sale nto, ewe, siya kuba sihlasela iinkqubo zokufikelela ezihlawulelweyo ezivelisa umxholo wentengiso.
Isangqa esipheleleyo… ukusebenziseka kakuhle kweinjini yokukhangela ngoku kuhlala kumagxa omthengisi omkhulu kwakhona nangaphandle komcebisi weSEO. Ukuvelisa umxholo ofanelekileyo, omangalisayo onokwabiwa ngokulula uya kukhawulezisa kwaye wandise uphawu lwakho. Xa oko kusenzeka, inqanaba lakho liya kulandela!
tags: Google +enjini yokukhangela nounUphando lwezoPhandoSEOIsicwangciso seo
Mar 22, 2013 ngo 12:03 PM
UDouglas wayelungile- ewe ndingumfundi wesantya. Thanda indlela ekucoceke kwaye kulula ngayo ukufunda, kunye nokufunxa. Ukucinga ngokudlulisela oku kubathengi abambalwa (izilayidi zakho)
Mar 22, 2013 ngo 12:48 PM
Enkosi kakhulu @prosperitygal: disqus!
Mar 26, 2013 ngo-5: 07 AM
Lowo ngumgaqo omnye osebenzayo, uDouglas. Ewe, sinokuzama ukwenza izinto ezininzi ukuphucula umgangatho wethu wokukhangela i-SEO kunye nokukwazi kwethu ukuvelisa intengiso elungileyo, kodwa ukuba ulandela oko kuthethwa nguGoogle, uyakuba ulungile.